8 arimood oo sababa burburka qoysaska qurbaha | Somaliska
Qoysaska ku nool qurbaha ayaa lagu xantaa in ay ka dhexjiraan qilaafaadyo balaaraan oo marar badan keena burburka qoyska iyo kala taga lamaanayaasha. Lama soo koobi karo inta aan maqlay reer Soomaali ah oo kala tagay. Waxaa maqlaysaa hooyadii ayaa aabaha dharka albaabka u dhigtay. Hadaba waa maxay sababaha ka dambeeeya burburka qoyska qurbaha? Inkastoo reerkasta ay sababtooda qaas u leeyihin ayaa hadana waxaa lagu soo koobi karaa 8 arimood.
1. Dhaqaalaha: Arinta ugu weyn ee lamaanayaashu isku qabsadaan ayaa ah lacagta. Qaasatan haddii hooyada ay shaqayso ayay arintu ku abuurtaa aabaha culeys iyo kalsooni daro. Waxaa kale oo dhibaato keenta haddii reerku ay ceyr qaataan. Xalka ayaa ah in arinta lacagta si wadajir looga wadahadlo, qaasatan in reerku ay samaystaan miisaaniyad muujinaysa halka qarashka lagu bixinayo. Muhiimadu waa in ay jidhaa is aaminaad iyo warbixinta oo la wadaago si qofkasta uu u ogaado jeebka kan kale.
2. Qaraabada: Arinta kale ee culeyska weyn ku dhalisa qoysaska ayaa ah qaraabada, qaasatan kuwa ku nool Somalia oo reerka ka dhex abuura qilaaf ka dhalanaya qaasatan dhinaca dhaqaalaha. Maadaama qofkasta ay soo dirsadeen reer oo laga sugayo in uu lacag soo diro ayay keentaa in culeyska qaasatan la saaro ninka. Haddii uu shaqeeyo ayaa laga filayaa in uu taageero reerkiisa iyo reerka xaaska. Xalka arintaan ayaa noqon kara in laga wadahadlo arinta oo qaasatan dumarku ay fahmaan culeyska ay leedahay arinta reerka. Sidoo kale ninku waa in uu fahmaa in gabadha caruurta u haysa ay soo dirsadeen reer kiisa la mid ah.
3. Daryeelka caruurta iyo guriga: Iyadoo Somalia markii la joogay ay hooyadu masuuliyada guriga lahayd ayaa marka qurbaha la yimid waxaa soo baxday in ninku uu qeybtiisa ka qaato ilaalinta caruurta iyo shaqada guriga. Inkastoo diin ahaan ay tahay arin haboon ayay hadana taasi ragg badan oo Soomaali ah ku dhalisay culeys aysan horay u aqoon. Arintaan xalkeeda ayaa ah in aabaha uu aqoonsado in uu masuuliyadiisa qaato oo arintaan aysan ahayn ceeb balse ay tahay qeyb ka mid ah shaqadiisa. Dumarka ayaa laga doonayaa in aysan ninka ku riixin arintaan oo aysan cadaadis ku saarin balse si wanaag ah iyo isfahan ah ay kaga dhaadhiciso in uu shaqada wax ka qabto.
4. Cadaadis (Stress): Nolosha iyo shaqada kadeedka ah ee qurbaha ayaa Soomaalida bartay eray cusub oo loo yaqaan Stress kaasoo keena in qofku uu dareemo kadeed iyo in uusan dhamaystiri karin hawsha u taala. Marka ay isku yimaadaan shaqada, iskuulka, caruurta, guriga, xaaska iwm ayay keentaa in dadka qaar ay nervoos noqdaan oo sidaas uu ku dhasho qilaaf. Xalka arintaan ayaa ah mid adag haddii uusan qofka ahayn mid ku wanaagsan xagamaynta cadaadiska balse waxaad samayn kartaa in aad waqti u kala samayso hawlaha kuu yaala oo midkasta aad waqtigeeda fuliso. Lamaanaha kale ayaa laga doonayaa in haddii uu dareemo seyga ama xaaska uu saaranyahay cadaadis uusan cadaadis kale sii saarin.
5. Dilka: Arintaan ayaa ah mid qatar ah oo keenta burburka qoysas badan, iyadoo ay Soomaaliya jireen ragg gacanta u qaada xaaskooda ayay hadana dabeecadii halkaan la yimaadaan. Gacanta keliya ma ahan balse aflagaadada iyo niyad dilka ayaa noqon kara nuuc ka mid ah dilka. Sida aad wada ogtihiin wadamada reer galbeedka waa ka mamnuuc dilka iyadoo keeni karta burbur degdeg ah oo qoyska ku yimaadaa.
6. Kala qeyb sanaan aragtida diinta: Maadaama ay sanadihii dambe soo bexeen fikrado kala duwan oo xaga diinta ah ayaa hadana tani ka dhex dhalatay qoysas horay u dhisnaa iyo kuwa cusub. Qof ayaa laga yaabaa in uu aaminsanyahay koox gaar ah halka kan kalena uu raacsanyahay koox kale. Arintaan ayaa ah mid muhiim ah in laga wada hadlo. oo qaasatan haddii ay reerku fikrada diinta ku kala duwanyihiin ay ku heshiiyaan kalaamka Allah iyo sunada nabiga (nnkh). Wixii intaas ka hooseeyana aysan ka wada hadlin.
7. Galmo la’aan: Arintaan ayaa ah mid aysan qaasatan Soomaalidu ka wada hadlin balse ah arin aad u muhiim ah. Lamaanayaasha ayay muhiimtahay in ay aqoonsadaan muhiimada arintaan iyo in xalkeeda uu yahay in ay isqanciyaan. Ceeb ma ahan in laga hadlo oo xitaa la yeesho habeen gaar ah oo isku day la sameeyo. Guurka waa in uu yahay mid ku dhisan jaceyl, galmaduna waxay ka midtahay astaamaha jaceylka lamaanayaasha.
8. Kala duwanaasho nolosha: Qoysaska qaar ayaa ah kuwo ay lamaanayaashu ay aad u kala duwanyihin, haddii ay ahaan lahayd in labada qof uu midkood ajanabi yahay, ama in midkood uu qurbaha ku dhashay kan kalena uu Somalia ku koray. Guud ahaan kala duwanaashaha ayaa noqon kara arin abuurta qilaafaadka iyo isfahandaro. Xalka ayaa ah in haddii aad galayso guur nuucaas ah aad u diyaar garowdo kala duwanaashaha isla markaana aad xushmayso fikrada iyo qaab dhaqanka qofka kale. Balse aad isugu timaadaan wixii diintu qabto, kana dheeraataan wixii ay mamnuucday.
Waa barnaamij aad u fiican, laakiin kamaan helin sida waadixa ah ee dhanka gogoshaad uga hadashay, aad in loo sarbeebo ayaa fiican laakiin Jimcaale waxaa kaa muuqata inaad qori jirtay bogaga dhalinta agu kaakicin jirey oo lagu bari jirey jeceylka iyo sida la iskugu tago. Sariira ayaa sarbeeb ahaan loo yiraahdaa waana la fahmi karaa waxa halkaas ku hoos duugan mahadsanaid si kastaba waana kaa mahad celinaya qoraalkaagan, laakiin inaan faceboog dhex dhigtaan damcay aniga oo aan qoraha xaqiisana duudsiinaya oo cadeynaya halka aan ka soo xigtay, laakiin waxaan ku nacay qoraalka dhan galmo erey ah ee ku jríra balaalyo ayuu soo bandhigay in la yiraahdo ayaan ka xishooday.
F.M aad baan guugu raacsanahay in halkaas wax ka qaldanyihiin, doodaydu maahan umuurta halkaas ku duugan yaan waxba laga qorin laakiin waa in looga hadlo si waafaqsan dhaqanka iyo diinta dadka aad wax u qorayso.
Tan kale oo aan is weydiiyey waxay tahay dhowr goor baan qoraalada Jimcale ku arkay asaga oo ka hadlaya amuuraha sariiraha-soomaaliyeed, sida uu u hadlayo iyo dooda dhaliisha huwan oo u gaarka ahna waligay qof soomaaliyed rag iyo dumar toona wax la qaba ma arkin.
Hadaba jimacale waxaan kula talin lahaa arimaha noocaas ah hor marin si maldahan loo harmariyo hadii ay u baahan yihiin xataa wax suuq la isla soo taago oo quumiyad dhalin sariiraheeda loo dhaliilo maahan ka gaabso oo aashaa.
Waa qoraal aadd muhiim u ah in loo sheego bulshada soomaliyeed waadna ku mahadsantahhay runtii waxyaalahaan u ka hadlay walaalkeen jimcaale waxay saldhhigu u yihiin burburka qoyska waana runn sababtoo ah wax badan ayaan ka arkay arimahaan uu ka hadlay waxayna ka jiraan qurbahaan aan ku noolnahay.naag la dilayo waa arkay. nin aan shaqaysan oo naagtii lacagtii cayrta ku haysta waa arkay kuwo dhaqamada ku kala duwan waan arkay kuwo gogosha ka cabanaya waan arkayn runtii waana xaqiiqo jirta. somali hadaan nahayna waxaa naga buuxa jaahiliinta nala ku sheegay ee somaliyey dalkeenii ka soo tagnay ee dalalka aan nimi aan fahano oo aan ka barano inta wanaagsan. inagu diinta islaamka waan sheeganayaa lkn kuma dhaqano runtii. FM iyo FARAH jaahilnimmada iska daaya oo waxas yaan laga hadlin ayaa qurbo nasoo dhoobtay ee fahma bulshada aad la nooshihiin wax badan baa idin ka maqane.Jimcaale aad baad u taabatay runta waadna ku mahadsantahay walaal.
Xeer cusub oo sahli doona dalabka sharciga ee waalidiinta ajaaniibta ah
La daabacay: kl 11:09 , Somaliska — Somali
Migrationsverkets lokaler i Märsta. Foto: Carolina Jemsby/Sveriges Radio
Sawirle: Carolina Jemsby/Sveriges Radio
Heshiis ey si wada-jir ah u gaareen xisbiyada ku midoobey garabka midig ee haya talada dalka iyo xisbigga Doogga ayaa lagu sheegay in lagu talo jiro dhammaan in la joojiyey xeerkii socdaalka ee oranayay in waalidka dhallaan dalkan ku leh aan lagu khasbin inuu waddan kale tago si uu halkaa uga soo dalbado sharci deggenaansho iyo siduu dhallaankiisa ula midoobi lahaa. Xeerkaasina oo horay doodo ballaaran u dhaliyay. Maria Ferm, waa af-hayeenka dhanka siyaasadda socdaalka ee xisbiga Doogga, Miljöpartiet oo loo soo gaabiyo MP ayaa sheegtay inay soo mareen tusaalooyin noocaasi ah:
Maahan mid wax ka badaleeysa baasaboorrada aan la ictiraafsaneyn
– Tusaalooyin noocaasi ah ayaa horey ii soo maray.
Ferm, ayaa sheegtay iyada oo hadalkeedii sii wadata iney xiriir la qeeybsatay waalidiin noocaasi ah oo ku khasbanaadey iney dalka isaga baxaan oo ey dib ugu laabtaan dalkoodii hooy, si ey halkaa uga soo dalbadaan sharci deggenaansho iyo meel kula noolaasho dhallaankooda. Mana ahan falal mustaqbalka dhici doona, sida ay sheegtay Maria Ferm, ahna af-hayeenka xisbiga Doogga ee dhanka arrimmaha socdaalka.
Culeeyska ayaa la saari doonaa xiriirka waalidka iyo dhallaanka ka dhexeeya. Waalidka la deggen dhallaankiisa oo uu masuuliyaddooda leeyahay ayaan u baahan doonin inuu dalka isaga baxo si uu dib ugu soo dalbado isaga oo ku sugan waddan kale ogolaansho deggenaansho iyo siduu dhallaankiisa ula noolaan lahaa.
Waxay noqon kartaa haweenay dalkan u soo baqooshay si ay ula noolaato nin halkan ku dhaqan, ey carruur isku dhaleen oo ey dabadeed kala tageen ninkii.
Si haddaba aanu dhallaanku u lumin xiriirka hooyadii waa in loo suurtageliyo inay deggenaansho ku dalban karto iyada oo dalka ku sugan ee aan lagu khasbin inay dalkeedii hooyo dib ugu laabato si ay halkaa uga soo dalbato sharci deggenaansho.
Xaaladahaa ayaa marar badan sidaa u dhaca, hase yeeshee ey ku kala duwan yihiin, sida uu sheegay wasiirka socdaalka Tobias Billström. Sidaa daraadeedna loo baahan yahay in caddaalad-darrada meesha laga saaro oo xeerka loo sinnaado:
– Fikirka wax ka bedel ee xeerka oo aanu iminka soo ban-dhigney wuxuu meesha ka saarayaa kala duwanaanta aan cadaaladda ku dhisnayn ee xeerku iminka hor-seedo, sida uu sheegay Tobias Billström.
Inta badan waxey amuurtaa ku dhacdaa dadyoowga soo-galootiga ah, hase yeeshee waa mid la soo gudboonaan karta ruux dalkan u yimid tacliin, cilmi-baaris ama howlo kale, hase yeeshee ka soo jeeda waddammo ka bax-san waddammada ku midoobey ururka Midowga Yurub oo EU loo soo gaabiyo.
Lena Rösell, ahna gacan-yare ka howl-gasha ururka madaxa-bannaan ee Stads missionen, muddo dheerna ku mashquulsanayd arrimmaha la xiriira dib-u-mideeynta qooysaska ayaa sidan ka tiri qoraalkan ka soo baxay wasaaradda socdaalka ee loo direy hayadaha uu khuseeyo iyo sidii ey uga soo talo dhiiban lahaayeen:
– Waan aamin-sanahay iney qoraalka ku jiraan arrimmo dhowr ah oo uu wanaag laga dheehan karo, hase yeeshee waxaa weli taagan dhibaatooyin badan oo u baahan sidii xal loogu heli lahaa.
Fikirkani xal u keeni maayo soo-galootiga aan laheyn dokumenti la ictiraaf-san ama aqoon-san yahay, xitaa haddey ilmo dalka ugu dhashaan. Cidda sharci-darrada dalka ku joogta ayaa sidoo kale dibadda ka taagan wax ka bedelka xeerka.
Tobias Billström iyo Maria Ferm ayaan fikirkaa ka soo hor-jeedin. Maadaama aanu heshiiskoodu khuseeyn qaxootiga dalka ugu sugan sida sharci-darrada ah iyo dhibaatooyinka kale ee laga dhawaajiyey. Hase yeeshee midda muhiimadda lihi tahay, sidii qooysaska la isugu heyn lahaa:
– Waa mid laga dhiidhiyo in waalid lagu war-geliyo in aanay ahayn sabab adag iney dhallaankooda meel kula sugnaadaan, sida ay sheegtay Maria Ferm.
Baaxadda iyo inta ruux ee dhibaatadani ku dhacdo ayaa ah mid aan la sheegi karin, sida uu qabo Tobias Bilström. Isagoona intaa raaciyay in aane ahayn tiro sidaa u badan ee dalkan timaadda oo ey dhibaatada noocaasi ah la soo gudboonaato.